SHWE MATE | မြန်မာ စားသောက်ဆိုင် လမျးညှနျ Myanmar Restaurant Guide Drecome Eat and Health
SHWE MATE | Sanchaung
မြန်မာအစားစာ / တရုတ် အစားစာ
ရွှေမိတ် ဟော့ပေါ့ နှင့်အကင် စားသောက်ဆိုင်ကို အမှတ် ၄၆/B ၊ ရှင်စောပုလမ်း ၊ အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက် တွင် ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ ဆိုင်မှာ သုံးထပ်ဖြစ်ပြီး မြေညီထပ်နှင့် ဒုတိယထပ်ကို ပုံမုန် စားသုံးသူများအတွက် သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာ ပြင်ဆင်ထားပြီး ၊ အပေါ်ဆုံးထပ်ကို Roof Top Bar တစ်ခုအနေနဲ့ ပြင်ဆင်ပေးထားသောကြောင့် ညနေဘက်တွင် လေညင်းခံရင်း အေးအေးဆေးဆေး အနားယူ အပန်းဖြေကာ စားသောက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိသားစုများနှင့် နေ့လည်စာ ၊ ညစာ သုံးဆောင်လို့ ကောင်းတဲ့ နေရာလေး ဖြစ်သလို လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနဲ့ လုပ်ငန်းကိစ္စပြောဆိုရင်း စားသောက်လို့ အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အစားအသောက်များ အနေနဲ့ကတော့ ဟောပေါ့ ကို အသားအမျိုးမျိုး ၊ အသီးအရွက်အမျိုးမျိုး တို့နှင့် အရသာရှိစွာ စားသုံးနိုင်ပြီး တရုတ်အစားအစာများဖြစ်သော ထမင်းကြော်၊ ခေါက်ဆွဲကြော်၊ ဖက်ထုပ်ကြော် စသည်တို့ကိုလည်း ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Drink Menu အနေနဲ့လည်း လတ်ဆတ်သော သစ်သီးဖျော်ရည်များ ၊ အရက် ၊ ဘီယာ ၊ ဝိုင် နှင့် အအေးအမျိုးမျိုးတို့ကိုလည်း သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဝါရင့် ကျွမ်းကျင် စားဖိုမှူးများမှ အစားအသောက်များကို ချက်ပြုတ် ပြင်ဆင်ပေးတာကြောင့် အရသာမှာ ထူးကဲကောင်းမွန်ပြီး စားသုံးသူများ ကြိုက်နှစ်သက်စွာ အားပေးကြပါတယ်။
ရွှေမိတ်သည် ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများ၊ Group Party ပွဲများ ၊ Company Party နှင့် Gathering Party များ ကျင်းပရန် အကောင်းဆုံး နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းမှာ သက်သာပြီး လူတန်းစား မရွှေးသုံးဆောင်နိုင်ကာ ဆိုင်ရှိ ဝန်ထမ်းများမှာလည်း အလွန်ဖော်ရွှေပြီး ဝန်ဆောင်မှု ကောင်းမွန်သောကြောင့် ရောက်သွားသူတိုင်း စိတ်ကျေနပ်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေမိတ်မှ ဟော့ပေါ့မှာ အရသာကောင်းမွန်ပြီး လူကြိုက်များ နာမည်ကြီးသောကြောင့် မြည်းစမ်း သုံးဆောင်ကြည့်ဖို့ ညွှန်းလိုက်ပါတယ်။
မြန်မာအစားစာ | တရုတ် အစားစာ
ထမင်း နှင့်ဟင်းလျာ | ဟော့ပေါ့
အိမ်တိုင်ရာရောက်ပို့ ပေးသည်၊ | ပြင်ပ သို့ယူဆောင်သွားနိုင်သည်။ | အားကစား တီဗွီ | ကားရပ်ထားရန်နေရာ | လေအေးပေးစက်
စုံတွဲ | အဖွဲ့လိုက်၊ပါတီ | နိုင်ငံခြားမှလာရောက်လည်ပတ်သူ | အမျိူးသား | အမျိူးသမီး | ဇိမ်ခံပစ္စည်း | သင်တင့်သောဈေးနှုန်း
10:00 AM - 11:00 PM ( ဘာမှမရှိပါ )
No. 47/ B, Shin Saw Pu Rd., Myay Ni Gone, Sanchaung Tsp., Yangon.
Sate Kyite Seafood Restaurant
မြန်မာအစားစာ, ထိုင်း အစားစာ
Min Lan Seafood Restaurant ( Sanchaung )
Oishii Sushi ( Myaynigone )